Maxaad ka Ogtahay Taarikhda Musharrax Jamaal Cali Xuseen, Hayaankii Dheeraa ee Waxbarashadiisii Taxnayd Hargeysa, Muqdisho Ilaa Jaamacada Harvard University, Maxa’se U Sahlay “Banking Award” Iyo Guushii Uu Gaadhsiiyey City Bank+Hiigsigiisa Mustaqbalka Ee S/land!!! | Berberatoday.com
Maxaad ka Ogtahay Taarikhda Musharrax Jamaal Cali Xuseen, Hayaankii Dheeraa ee Waxbarashadiisii Taxnayd Hargeysa, Muqdisho Ilaa Jaamacada Harvard University, Maxa’se U Sahlay “Banking Award” Iyo Guushii Uu Gaadhsiiyey City Bank+Hiigsigiisa Mustaqbalka Ee S/land!!!
Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen waxa u kasoo shaqeeyey Baananka ugu weyn ee Caalamka oo uu kamid ah ee City Bank oo laga leeyahay wadanka Maraykanka, waxanu ku guulaystay “Banking Award” oo ah abaal marin dhanka baananka ah. Abaal-marintaasina waxa uu aqoonyahankani ku mutaystay kadib markii Baankii uu maamulaayey qaybtii sa wadamada Tanzania iyo Ivory Coast uu noqday ka ugu tayo fiicnaaday uguna macaashka batay. Waa markii labaad ee isla sannadkan 2010-ka gudihiisa la guddoonsiiyo abaal-marintaasi (Award), taasi oo Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ku kasbaday Baankii uu isagu hoggaaminayey oo noqday Baanka ugu fiican “Besta Bank” iyo waliba “Best Investment Bank”.Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga Ucid Jamaal cali Xuseen waxaynu maanta wax yar oo guud mar ah kasoo qaadanaynaa taarikhdiisii yaraantii iyo waayihiisii waxbarasho ee taxnaa ilaa Hargeysa, Muqdisho iyo Ilaa Maraynkanka. Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen waxa uu ku dhashay magaaalada Hargeysa ee caasimada Jamhuriyadda Somaliland Sanadku markuu ahaa 1965, Jamaal cali xuseen waa Aqoonyahan ku takhasuusay cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga, waxaana uu wax kusoo bartay jaamacada aduunka ugu horeysa ee looyaqaano Harvard University ee ku taala Cariga Maraykanka. kadib Qalinjabitii Jamacada Jamaal cali Xuseen Waxa uu kasoo shaqeeyay bangiyo caalamiya oo waawayn kuwaas oo ka midyihiin bangiga wayn ee City Bank kaas oo uu ka gaadhay inuu noqdo Maareeye guud ama Chief executive officer. Waana Musharaxaha Madaxweyne ee Xisbiga Mucaaradka ah ee Ucid.
Musharrax Jamaal Cali Xuseen waxaynu yara dul istaagaynaa Waxbarashadiisii hose dhexe iyo waayihisii macalinimo ee dalkii la isku odhan jiray Soomaliya. Intii Hore ee Noloshiisa Jamaal Cali xuseen wuxuu ku dhashay kunasoo Barbaaray Magaalada Hargeysa , isagoo isla magaalada Hargeysa ka bilaabay waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ilaa waxbarashadiisa heer Dugsi Sare, isagoona ka baxay dugsiga sare ee ”’Faarax Oomaar”’ Magaalda Hargeysa.
Waxa kaloo Jamaal Cali xuseen yaraantiisi wuxuu jeclaa ciyaaraha ama Sports-ka , gaar ahaan Kubada kolayga , cagta iyo walaiba kubada Teniska Miiska ( ”’Table Tennis”’ ) kaas oo uu ka gaadhay ilaa heerka ciyaarihii Gobolada ee Jmahuriyadii Sommalida , isagoona usaftay Gobalkii ”’Waqooyi Galbeed. Waxbarashadiisii Sare ee Heer Jaamacadeed. kadib markuu Jamaal cali Xuseen Ka qalin Jabiyay Dugsiga sare, waxa uu ka bilaabay waxbarashadiisii sare Maxadkii ama college-kii barashada xisaabadka iyo Dhaqaalaha ee ”’Sidam”’ oo ku yaalay magaalada ”’Muqdisho,”’ Halkaas oo uu ka qaatay shahaadadii darajada koowaad ee cilmiga xisaabaadka ”'( Degree in BA Accounting) , i”’sagoo ahaa ardaygii ugu sareeyay jamacada , isla sanadkaana waxa loo qaatay inuu Bare ama Macalin ka noqdo isla jamacadaas.
Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen waxa u kasoo shaqeeyey Baananka ugu weyn ee Caalamka oo uu kamid ah ee City Bank oo laga leeyahay wadanka Maraykanka, waxanu ku guulaystay “Banking Award” oo ah abaal marin dhanka baananka ah. Abaal-marintaasina waxa uu aqoonyahankani ku mutaystay kadib markii Baankii uu maamulaayey qaybtii sa wadamada Tanzania iyo Ivory Coast uu noqday ka ugu tayo fiicnaaday uguna macaashka batay. Waa markii labaad ee isla sannadkan 2010-ka gudihiisa la guddoonsiiyo abaal-marintaasi (Award), taasi oo Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ku kasbaday Baankii uu isagu hoggaaminayey oo noqday Baanka ugu fiican “Besta Bank” iyo waliba “Best Investment Bank”.
Hadaba waxa Musharrax Jamaal Cali Xuseen la gudoonsiiyey “African Banking Awards Dinner 2010”, taaso sannadkiiba mar la qabto. sidoo kalena Maaha markii ugu horeysay ee Aqoonyahan Jamaal ku guulaysto ama uu helo abaal-marintan, balse tan oo kale waxa uu helay sannadkii kan ka horreeyey ee 2009-ka. Musharrax Jamaal cali Xuseen waxa uu kamid noqday shaqsiyaadka dedaalka iyo Heerarkaii ugu sarreeya nolosha ka gaadhay, Aqoonayahan Abwaan Jamaal Cali Xuseen, wax ay dhammaanteenba inagu baraarujinaysaa in qofka bani’aadamka ahi ka midho dhalin karo wax kasta oo dedaalkeeda uu la yimaado una dhabar adaygo. La soco qaybaha danbe…
Diyaarintii Shabakadda Xogreebnews